Komishanka oo caddeeyay inay doorashadda Deegaanku ka dhacayso Degmadda Xudun | Somaliland.Org
Komishanka oo caddeeyay inay doorashadda Deegaanku ka dhacayso Degmadda Xudun
November 19, 2012	Hargeysa, (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka ee Degmada Xudun Cabdilaahi Labo-goole ayaa caddeeyey in doorashada golaha deegaanku ay ka qabsoomi doonto deegaankaas.
Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka ee Degmada Xudun Cabdilaahi Labo-goole oo shalay shirjaraa’id ku qabtay Degmada Xudun oo ay goob-joog ka ahaayeen xubno ka socday ururrada iyo xisbiyada ku tartamaya doorashada deegaanka.
Guddoomiyaha Komishanka Doorashooynka ee Degmada Xudun waxa uu sheegay in degmada Xudun ay nabadgelyo tahay oo ay ka dhici doonto doorashada deegaanka ee la filayo inay ka qabsoonto 28-ka bisha November ee aynu ku jirno.
Guddoomiyaha Komishanka ee Degmada Xudun isagoo arrimahaas ka hadlaya waxa uu yidhi. “Dadka in badan ayaa dhagahooda waxa ku soo dhacayay Xudun ammaan maaha dadka in badan ayaa waxa laga dhaadhiciyay Xudun waxba kama dhici karaan. Waxaanan ummadda u sheegaynaa Xudun inay nabadgelyo tahay in wax ka dhici karaan waxna ka qabsoomi karaan goobta hadeerto aan fadhiyaana ay tahay Degmada Xudun xafiiskii guddida doorashooyinka ee Degmada Xudun.”
Guddoomiyaha Degmada Xudun isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi. “Hawshan aanu maanta u nimi hawsha waxa weeye waxa yaalay cabashooyin nagaga imanayay ururrada, cabashooyinkaas oo ku saabsanaa Xudun waxba kama dhici karaan, Anigu waxaan ku hadlayaa afka guddoomiyaha guddida doorashooyinka oo aan wakiil uga ahay, kuna matalayo, waxaanu amar igu soo siiyay in hawsha Xudun aan soo afjarno. Anigoo ay igu weheliyaan dhammaan ururrada iyo wakiillada xisbiaysda, magaaladu waa amni sida aad la wada socotaan afartaa goobood ee ay ka dhawaajiyeen madaxda Komishanku mooyaane inta kale waa amni, doorashaduna way ka dhacaysaa.”
Previous PostHanti-dhawraha Guud oo Beeniyay inay dacwad ku soo Oogayeen Shirkad GanacsiNext PostGuddida Diiwaan-gelinta oo shaaciyay qaabka ay u kala saarayaan Ururrada tartamaya	Blog